कलाकारितामा डाक्टर इन्जिनियर, को कति सफल ?
Thu, May 24, 2018 | 23:33:34 NST
Total Views: 32.9 K
काठमाडौं, वैशाख ७ – जेठ पाँच गते रिलिज हुने तयारीमा रहेको सिनेमा ‘डायरी’मार्फत नेपाली सिनेमा उद्योगले एक नयाँ अनुहार पाउँदैछ । ‘डायरी’माफर्त अभिनेता सन्नी सिंहले सिने उद्योगमा ब्रेक लिँदैछन् ।
सन्नी ईलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियर हुन् । तर उनी बाल्यकालदेखि नै मिडिया क्षेत्र एकदमै मन पर्ने भएका कारण मोडलिङ हुँदै सिनेमामा प्रवेश गरेको बताउँछन् । उनको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि प्राविधिक छ ।
सन्नीले सिनेमामा आउनु भन्दा पहिले केही बिज्ञापनहरुमा पनि काम गरेका थिए । सन्नी मात्रै यस्ता कलाकार हैनन् जो प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेर कलाकारितामा लागे । सन्नी भन्दा पहिले पनि केही ईन्जिनियर र डाक्टर पढेकाहरुले कलाकारितामा हात हालेका छन् जसमध्ये केही सफल छन् भने केही औसत रहेका छन् ।
प्राविधिक क्षेत्रबाट कलाकारितामा लागेर सबैभन्दा चर्चा र सफलता पाउने व्यक्ति हुन् स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल । डाक्टर भोला रिजाल गीतकारका रुपमा प्रख्यात छन् । त्यस्तै उनी सिनेमा क्षेत्रमा पनि सक्रिय छन् । उनले आफ्नै केही गीतहरु गाउनुका साथै अभिनय पनि गरेका छन् । राष्ट्रिय भावका केही बिज्ञापनहरुमा पनि उनले अभिनय गरेका छन् । विशेष गरी गीत रचनामा रुची राख्ने उनलाई र्याफटिङ बिसाउने, मैना ए मैना, सित्तैमा लौ सित्तैमा सित्तैमा, चोरी भो चोरी भो, मैलै आँखाको भाका बुझिन लगायतका गीतहरुले सफल गीतकारको परिचय दियो । भोलाले ९ वटा सिनेमा पनि निर्माण गरिसकेका छन् । डाक्टरी पेशामा निकै व्यस्त रहने उनी सिर्जनाका लागि समय नचाहिने बताउँछन् ।
नेपाली माईकल ज्याक्सनको नामले परिचित भएका गायक धिरज राई सरकारी जागिरे हुन् । आर्किटेक्ट सब–ईन्जिनियर उनी दिनभर सरकारी जागिर गर्छन् । सरकारी जागिरबाट समय निकालेरै पनि उनले आफ्नो गायन यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाईरहेका छन् । उनले आफ्नै ईन्जिनियरिङ कम्पनी पनि खोलेका छन् । यसका साथै उनी साहित्य सिर्जना र अध्यापनका लागि पनि समय निकाल्छन् । तीन सय भन्दा धेरै गीतहरु गाएका उनले १५ वटा एल्बम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । धिरजका आमा बुवा दुवै जना प्रोफेशर हुन् । यहि कारण उनलाई पनि बाल्यकाल देखि नै पढाउन खुबै मन पर्थ्यो । आमाबाबु बाटै प्रेरित भएका उनी अंग्रेजी साहित्यमा मास्टर गरेर अहिले लेक्चरर पनि बनिसकेका छन् ।
अभिनेत्री तथा भिजे सुरक्षा पन्त हाल कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत छन् । तर उनी कलाकारिता र मिडियामा आउनु भन्दा पहिले पेशागत हिसाबले उनी एक सिभिल ईन्जिनियर हन् । ईन्जिनियर भएपनि उनलाई भिजेको रुपमा काम गर्न निकै रमाईलो र मजा लाग्छ । सिनेमा ‘अझैपनि’मार्फत सिने उद्योगमा ब्रेक लिएकी उनले त्यसपछि ‘सुस्केरा’ र ‘धनपति’मा काम गरिसकेकी छिन् । उनका यी दुई सिनेमा भने रिलिजको पर्खाइमा छन् । आफ्नो लागि कलाकारितामा लागेपनि परिवारको लागि ईन्जिनियरिङको कामलाई निरन्तरता दिने सुरक्षाको सोच छ । सुरक्षाले केही म्युजिक भिडियो र बिज्ञापनहरुमा पनि काम गरिसकेकी छिन् ।
‘चक्लेट’बाट सिने उद्योगमा प्रवेश गरेका अभिनेता हुन् आयुष्मान घिमिरे । आयुष्मान घिमिरे पेशाले चिकित्सक हुन् । छाला रोग विशेषज्ञ उनलाई मिडिया भनेपछि खुबै मन पर्छ । उनलाई लाईमलाईटमा आउन मन पर्नेे भएका कारण अभिनयमा आएका हुन् । आफ्नो चिकित्सक पेशा एकातिर छँदै छ तर नाम कमाउने रहरले उनी अभिनयमा आएको बताउँछन् । आयुष्मानले एमबीबिएस अध्ययनको क्रममा मिस्टर नेपालमा सहभागिता जनाएर उपाधी पनि जितेका थिए । तर ट्रेनिङमा आउँदै नआएको मान्छेलाई कसरी उपाधी ? भनेर उजुरी परेपछि उनले त्यो उपाधी पाएको अर्थ रहेन । मिडियामा छाईरहन मन पराउने आयुष्मानले केही बिज्ञापनहरुमा पनि काम गरिसकेका छन् । त्यस्तै उनलाई ‘चक्लेट’ गर्नु भन्दा पहिले पनि सिनेमाको अफर आएको थियो । तर सिनेमा ग्ल्यामर भएका कारण नगरेको उनी बताउँछन् ।
अभिनेत्री स्वस्तीमा खड्काले दोस्रो सिनेमा ‘लभ लभ लभ’ रिलिज भएपछि खुबै तारिफ बटुलीरहेकी छिन् । उनको अभिनयलाई ‘लभ लभ लभ’ मा धेरैले मन पराएका छन् । धेरैले उनलाई अभिनेत्री हुनकै लागि जन्मेको युवतीको संज्ञा पनि दिईरहेका छन् । एक अभिनेत्री र मोडलको रुपमा परिचित भएकी उनी पनि प्राविधिक शिक्षा पढेर यस क्षेत्रमा लागेकी हुन् । स्वस्तीमा आर्किटेक्ट सब–ईन्जिनियर हुन् । कलेज पढ्दा पढ्दै मिस टिनमा भाग लिएकी उनीसँग एक ईन्जिनियरको अनूभव पनि छ । मिस टिनमा भाग लिएर उत्कृष्ट पाँचमा परेकी उनले त्यसपछि लगातार मोडलिङमा काम गर्ने मौका पाईन् । मोडलिङले दिएको सफलता पछि उनले सिनेमा ‘होस्टेल रिटन्र्स’मा काम गरिन् । ईन्जिनियरिङ पछि अभिनयमा आएकी उनी फेरि पनि विषय परिवर्तन गर्ने सोचमा छिन् । उनी अब ईन्टेरियर डिजाईनिङको कोर्स गर्न चाहन्छिन् ।
रणजीत कुमार झा
बंगलादेशबाट एमबीबिएस पढेर हाल शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका एम डी बनेका छन् डाक्टर रणजीत कुमार झा । उनको परिचय यत्तिमा मात्रै सिमित छैन । उनले आफ्नो परिचयमा गायक पनि थपेका छन् । झण्डै डेढ वर्ष देखि चिकित्सकको रुपमा कार्यरत उनी संगीतमा भने दुई दशक देखि सक्रिय छन् । दुई दशकको संगीत यात्रामा उनले दुईवटा एल्बम सार्वजनिक गरेका छन् भने २० वटा गीतमा आवाज दिएका छन् । उनी चिकित्साबाट जोगिएको समयलाई संगीत साधनामा खर्चिन्छन् ।
नायिका रजनी केसी सिनेमामा आउनु भन्दा पहिले एक एनजीओ मा काम गर्थिन् । सिनेमा प्रति सानैदेखि रहर भएकै कारण फार्मेसी पढेकी उनी सिनेमामा आएको बताउँछिन् । सानै देखि स्टेज शोहरुमा नाच्ने गरेकी उनलाई नाच्दा नाच्दै सिनेमा आउने रहर जागेको हो । राम्रो कमाई हुने क्षेत्र (मेडिकल लाईन) समातीसकेकी उनी रहरले नै कमाईको टुङगो नहुँदा पनि सिनेमामा आएको बताउँछिन् । रजनीका हालसम्म चार वटा सिनेमा रिलिज भएका छन् लोफर, परदेशी, लालजोडी र ब्रासलेट । उनले अभिनय गरेको सिनेमा ‘परदेशी’ले लामो समयसम्म हलमा लाग्ने सिनेमाको रेकर्ड राखिसकेको छ ।
स्वराकोे पहिरन देखेर सामाजिक सञ्जालमा ‘निरमा गर्ल भन्दै मजाक’ उडाइयो
जेठ १० – करीना कपूर, सोनम कपूर, स्वरा भास्कर र शिखा तल्सानियाको फिल्म ‘वीरे दी वेडिङ्ग’ छिट्टै प्रदर्शन हुदैछ ।
​दीपिका पादुकोणले कुनै पनि फिल्म साइन नगर्नुको कारण यस्तो
जेठ ८ – अभिनेत्री दीपिका पादुकोण केही समयअघि प्रदर्शन भएको फिल्म ‘पद्मावत’ मार्फत दर्शक माझ आएकी थिइन् ।